ပညာရေး လွမ်းနေလို့မပြီး … လုပ်ရဲ၊ ကိုင်ရဲ၊ ပြောရဲဖို့ အရေးကြီး
၁၉.၇.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် (၇း၃ဝ) နာရီတွင် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်သို့ လူငယ်နှစ်ဦး ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ၄င်းတို့၏လက်ထဲတွင် လှပဝေဆာစွာ ပန်းရောင်စုံအလှဆင် ထားသော ပန်းခြင်းတစ်ခုအား
သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ အကြောင်းစုံသိလို၍ မေးမြန်းကြည့်ရာ ယနေ့ အာဇာနည်နေ့တွင် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ဂူဗိမာန်သို့သွားရောက် ပန်းခွေချအလေးပြုရာတွင် ပန်းခွေချအလေးပြုခွင့် မရရှိခဲ့သည့်အတွက် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)၏ “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်အတွင်း၌ရှိသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ပန်းချီကားချပ်ကြီးရှေ့တွင် လာရောက်၍ ပန်းခွေချလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ကြားသိခဲ့ရသည်။ ထိုလူငယ်သည် တစ်ချိန်က နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)သို့ ငွေလှူဒါန်းချိန်တွင် အသင်းမှ ဧည့်ကြိုတာဝန်ကျ လူမှုရေးသမားများတို့၏ လိုက်လံရှင်းပြခြင်းဖြင့် “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်အတွင်း၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပန်းချီကားချပ်ကြီးအား တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ လေးစားစရာ၊ ဂုဏ်ယူဖွယ် ကောင်းလေစွဟုပင် တွေးတောမိပါတော့သည်။
နံနက် (၁ဝး၃၇) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)မှ လူနာတင်ယာဉ်နှစ်စီးဖြင့် အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ လုပ်အားပေးလူငယ်များတို့သည် ကန်တော်ကြီးစောင်းရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ်ရှေ့တွင် ဥသြစွဲ အလေးပြုခဲ့သလို နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်တွင်လည်း လူနာတင်ယာဉ်နှင့် နာရေးပို့ဆောင်ယာဉ်များ စုပေါင်း၍ (၁) မိနစ်ခန့် ဥသြစွဲ၍ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား အလေးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်း၌ လူငယ်များ မြန်မာစာပေအရေးအသားနှင့် အပြောအဆိုစွမ်းရည် တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည် သူရဲကောင်းကြီးများ၏ ကျဆုံးခဲ့သောနေ့ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်တို့ကဲ့သို့ အမှန်တရားကို ပြောရဲ၊ ဆိုရဲ၊ ရေးရဲ၊ လုပ်ရဲကိုင်ရဲတည်းဟူသော အကြောက်တရားများ၊ အနာဂတ်၏ မျိုးဆက်သူရဲကောင်း လူငယ်ကလေးများ အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ရဲတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ “သုခအလင်း” ပညာဒါနမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အာဇာနည်နေ့ ကျပန်းစကားပြောနောက်ဆုံးဆင့်ပြိုင်ပွဲနှင့် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားအား ကျင်းပခဲ့ရာ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်မှ ကျပန်းစကားပြောပွဲ ပြုလုပ်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ဆရာမ ဒေါ်နီလာဘာရာဒွါဂျာ မှ ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများအား ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ၁၄.၇. ၂ဝ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပဏာမလူရွေးပွဲအဆင့် အောင်မြင်ခဲ့ကြသူများတို့ ယှဉ်ပြိုင်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ယင်းပြိုင်ပွဲအား အကဲဖြတ်များအနေဖြင့် သုခအလင်းပညာရေးမှ ဒေါ်ခင်ခင်ဖြူအောင်၊ ဒေါ်နီလာဘာရာဒွါဂျာ၊ ဆရာပြည့်၊ ဦးအောင် ကျော်မင်း (မြန်မာစာပါမောက္ခ-ငြိမ်း)၊ ဆရာဟိန်းလတ်၊ ကိုမျိုး(မြန်မာစာ)၊ အလင်းဆက်(IR)၊ ဖူးကျော်ဇင် (Future Wave) တို့မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲအား ၅.၇.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့တွင် ယှဉ်ပြိုင်စေခဲ့ပြီး ဆုရရှိကြသည့် ကျောင်းသား/သူများတို့အား ယနေ့ အာဇာနည်နေ့တွင် ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများနှင့် တွဲဖက်၍ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်များနှင့်အတူ ဆုလက်ဆောင်များအသီးသီး ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)မှ အာဇာနည်နေ့တွင် အနာဂတ်၏ သူရဲကောင်း အာဇာနည်များအား ရွေးထုတ်ချီးမြှင့်ခြင်းဖြင့် (၆၆) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့တွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား ဂုဏ်ပြုဦးညွှတ် ဂါရဝ ပြုလိုက်ရပါတော့သည်။
(လွမ်းဆွတ်နေလို့မပြီး … ချမှတ်ညွန်ပြထားတဲ့ ကောင်းသောလမ်းကို မမှိတ်မသုန် ဇွဲလုံ့လ ဝီရိယတို့နဲ့ ရဲရဲတွေး၊ ရဲရဲပြော၊ ရဲရဲဆက်လျှောက်ဖို့က အရေးကြီးသည်။)
၁၉.၇.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် (၇း၃ဝ) နာရီတွင် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်သို့ လူငယ်နှစ်ဦး ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ၄င်းတို့၏လက်ထဲတွင် လှပဝေဆာစွာ ပန်းရောင်စုံအလှဆင်ထားသော ပန်းခြင်းတစ်ခုအား သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ အကြောင်းစုံသိလို၍ မေးမြန်းကြည့်ရာ ယနေ့ အာဇာနည်နေ့တွင် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ဂူဗိမာန်သို့သွားရောက် ပန်းခွေချအလေးပြုရာတွင် ပန်းခွေချအလေးပြုခွင့် မရရှိခဲ့သည့်အတွက် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)၏ “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်အတွင်း၌ရှိသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ပန်းချီကားချပ်ကြီးရှေ့တွင် လာရောက်၍ ပန်းခွေချလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ကြားသိခဲ့ရသည်။ ထိုလူငယ်သည် တစ်ချိန်က နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)သို့ ငွေလှူဒါန်းချိန်တွင် အသင်းမှ ဧည့်ကြိုတာဝန်ကျ လူမှုရေးသမားများတို့၏ လိုက်လံရှင်းပြခြင်းဖြင့် “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်အတွင်း၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပန်းချီကားချပ်ကြီးအား တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ လေးစားစရာ၊ ဂုဏ်ယူဖွယ် ကောင်းလေစွဟုပင် တွေးတောမိပါတော့သည်။
နံနက် (၁ဝး၃၇) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)မှ လူနာတင်ယာဉ်နှစ်စီးဖြင့် အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ လုပ်အားပေးလူငယ်များတို့သည် ကန်တော်ကြီးစောင်းရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ်ရှေ့တွင် ဥသြစွဲ အလေးပြုခဲ့သလို နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်တွင်လည်း လူနာတင်ယာဉ်နှင့် နာရေးပို့ဆောင်ယာဉ်များ စုပေါင်း၍ (၁) မိနစ်ခန့် ဥသြစွဲ၍ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား အလေးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်း၌ လူငယ်များ မြန်မာစာပေအရေးအသားနှင့် အပြောအဆိုစွမ်းရည် တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည် သူရဲကောင်းကြီးများ၏ ကျဆုံးခဲ့သောနေ့ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်တို့ကဲ့သို့ အမှန်တရားကို ပြောရဲ၊ ဆိုရဲ၊ ရေးရဲ၊ လုပ်ရဲကိုင်ရဲတည်းဟူသော အကြောက်တရားများ၊ အနာဂတ်၏ မျိုးဆက်သူရဲကောင်း လူငယ်ကလေးများ အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ရဲတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ “သုခအလင်း” ပညာဒါနမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အာဇာနည်နေ့ ကျပန်းစကားပြောနောက်ဆုံးဆင့်ပြိုင်ပွဲနှင့် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားအား ကျင်းပခဲ့ရာ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်မှ ကျပန်းစကားပြောပွဲ ပြုလုပ်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ဆရာမ ဒေါ်နီလာဘာရာဒွါဂျာ မှ ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများအား ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ၁၄.၇. ၂ဝ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပဏာမလူရွေးပွဲအဆင့် အောင်မြင်ခဲ့ကြသူများတို့ ယှဉ်ပြိုင်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ယင်းပြိုင်ပွဲအား အကဲဖြတ်များအနေဖြင့် သုခအလင်းပညာရေးမှ ဒေါ်ခင်ခင်ဖြူအောင်၊ ဒေါ်နီလာဘာရာဒွါဂျာ၊ ဆရာပြည့်၊ ဦးအောင် ကျော်မင်း (မြန်မာစာပါမောက္ခ-ငြိမ်း)
၊ ဆရာဟိန်းလတ်၊ ကိုမျိုး(မြန်မာစာ)၊ အလင်းဆက်(IR)၊ ဖူးကျော်ဇင် (Future Wave) တို့မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲအား ၅.၇.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့တွင် ယှဉ်ပြိုင်စေခဲ့ပြီး ဆုရရှိကြသည့် ကျောင်းသား/သူများတို့အား ယနေ့ အာဇာနည်နေ့တွင် ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများနှင့် တွဲဖက်၍ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်များနှင့်အတူ ဆုလက်ဆောင်များအသီးသီး ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့သည်။